Times24 Nepal » एमसीसीको विपक्षमा बोले मन्त्रीहरुको पद स्वाहा। केपी ओली
एमसीसीको विपक्षमा बोले मन्त्रीहरुको पद स्वाहा। केपी ओली
काठमाडौं। विवादमा आइरहेको विकास र सहयोग सम्बन्धि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेञ्ज एमसीसी बारे अब मन्त्रीहरुले जथाभावी बोल्न नपाउने भएका छन्। २८ पुसमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले एमसीसीबारे मन्त्रीहरुलाई बोल्न प्र’तिबन्ध लगाउने गरी निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताए।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै एमसीसी स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को विवाद छ। अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी परियोजना भए नेपालले स्वीकार नगर्ने अधिकाशं नेकपा नेताहरुको भनाई आइरहदा पनि त्यसलाई जसरी पनि पारित गर्ने योजनामा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै मन्त्रीहरुलाई बोल्न प्र’तिबन्ध लगाएका हुन्।
उहाँ प्रधानमन्त्री ले ह्वीप नै लगाए जसरी एमसीसीको विपक्षमा बोल्दै नबोल्न कडा निर्देशन दिनुभयो। एक मन्त्रीले भने’ एमसीसीको विपक्षमा बोल्ने हो भने मन्त्री पद छोडेर जान नै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले सरकारमा पनि बस्ने अनि एमसीसीको विरोधमा पनि बोल्दै हिंड्ने कुरा आफूलाई सैह्य नहुने भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ।
पार्टीकै नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायत नेताहरुले यस विषयमा जनताका बीचमा अनावश्यक भ्रम मात्र सिर्जना गर्न खोजेको र पार्टी र नेतृत्वका वि’रुद्ध बोल्नेलाई पार्टीले त्यक्तिकै नछोड्ने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो। भीम रावलले बालुवाटारबाट आफूलाई ज्यानको ध’म्की दिइसकेको तर्फपनि प्रधानमन्त्रीले निक्कै कडा रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै ती मन्त्रीले भने’ एमसीसीबारे नभएका कुराहरु ठूल्ठूलो स्वरमा प्रचार गर्ने अनि बालुवाटारले आफूलाई ज्यान मा’र्ने ध’म्की दिएको झु’टो आरोप लगाउँदै हिडने’? बालुवाटार भनेको के हो’? को हो बालुवाटार’? जथाभावी बोल्दै हिंड्ने’? पार्टीको जिम्मेवार नेताले जे पायो त्यहीँ भन्दै हिंड्ने पनि हुन्छ’? अब यस्तो सहिन्न।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिंदै भने’ अब उप्रान्त कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि मन्त्रीले एमसीसीबारे न’कारात्मक कुरा नगर्नु होला। सरकारमै रहेका मन्त्रीहरु योगश भट्टराई र घनश्याम भुषाल एमसीसीबारे अलिक प्रष्ट नभई संसदबाट पारित गराउन नहुने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यही बुझेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने, यसमा अब जे भयो भयो, अब यो पारित गरेर जाने सरकारको नीति हो। यसको वि’रोधमा अब बोल्दै नबोल्नुहोस कसैले पनि।
एमसीसी पास हुन्छ’ सरकार प्रस्ट छ: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास हुने बताएका छन्। एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भए नभएको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को बहस भएको थियो। यसबारे सरकारले अमेरिकासँग बुझ्ने र सचिवालयले निर्णय गर्ने सहमतिका साथ बैठक सकियो। तर त्यही बेला काठमाडौं स्थित अमेरिकी दूताबासका अधिकारीले एमसीसी, इण्डो प्यासिफिककै अंग भएको अभिव्यक्ति दिए।
अब नेकपाले के गर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने सम्झौता पास हुने बताए। एमसीसीबारे सरकारले जे भन्दै आएको छ त्यही हो’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका उनले भने, यो पास हुन्छ। सरकार प्रस्ट छ। तर अमेरिकी अधिकारीले त एमसीसी, इण्डो प्यासिफिककै अंग भएको बताएका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले नेपालले हस्ताक्षर गर्दा के थियो भनेर हेर्नुपर्ने बताए।
उनले अघि भने, पछि ककसले केके जोडे मतलब हुँदैन। सही गर्दा के छ भन्ने हेर्नुपर्छ। उनले एमसीसीबारे सकारात्मक बहस गर्न र कार्यक्रमले कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर हेरिदिन आग्रह गरे। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्न एमसीसी सहयोगी हुने भन्दै उनले हचुवाका भरमा गरिने हलुका टिप्पणीले मुलुकको बृहत्तर हितमा आँच पुग्ने बताए। नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न एमसीसी अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ। अनलाइन मार्ग